काठमाडौँ । सचिवहरुको अवकाश हुने क्रममा एकजना प्राविधिक सचिवको अवकाश भएको छ । गत चैत ३ गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका सचिव शिवहरि शर्मा ५८ वर्ष उमेरहदका कारण अवकाश भएपछि प्राधिकरण सचिवविहीन बन्न पुगेको छ ।
शर्मा गत श्रावणमा सचिव अर्जुन कार्कीको अवकाशपछि वरिष्ठताको हिसाबले निमित्त सचिवबाट गत भदौ २६ गते सचिव पदमा बढुवा भई ६ महिना मात्र कार्यरत रहेका थिए । प्राविधिक सहसचिव हुँदा शहरी तथा भवन निर्माण विभागको महानिर्देशक र केही महिना शहरी विकास मन्त्रालयमा कार्यरत रही राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा सरुवा भएका थिए ।
अब शर्माको ठाउँमा सचिव पदमा बढुवा हुन तीनजना वरिष्ठ प्राविधिक सहसचिवहरुको तीव्र प्रतिस्पर्धा चल्ने जानकारहरुले बताएका छन् । जसमध्ये वरिष्ठ भएर पनि यसअघि सचिवमा बढुवा हुन नसकेका प्रा. सै. स. सागर राई, नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सुरेश आचार्य र सहरी तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल रहेका छन् । सचिव गजेन्द्र ठाकुरको सिटमा तेस्रो नम्बरमा रहेका रामकृष्ण सापकोटा सचिवमा बढुवा भई हाल नेपाल ट्रष्टमा कार्यरत रहेका छन् । यस पटक पनि वरिष्ठताको हिसाबले तेस्रो नम्बरमा रहेका महानिर्देशक गेलालको सचिवमा बढुवा हुने स्रोतले बताएको छ । वर्तमान सरकारको प्राथमिकतामा अन्य प्राविधिक सहसचिवहरुभन्दा सैद्धान्तिक दृष्टिकोणले गेलाल परेकाले उनकै बढुवा हुने चर्चा चलेको छ । सरकारले बढीमा १५ दिनभित्र सचिवमा बढुवा गर्ने बताइएको छ । महानिर्देशक गेलाल चलाख र क्षमतावान् मानिन्छन् ।